फर्सीको साग खानुको ६ अचुक फाइदाहरु – Tungoon
काठमाडौं । कात्तिक १३ गते
हरियो सागपात स्वास्थ्यका लागि निकै फाइदाजनक हुन्छ । हरियो साग खानाले आँखा तेजिलो हुने चिकित्सकहरु बताउँछन् । हरियो सागसब्जीमध्ये फर्सीको मुन्टामा अझ विशेष गुण हुन्छ । जुन मानव स्वास्थ्यका लागि निकै लाभदायी हुन्छ । त्यस्तै हरियो फर्सिको मुन्टा खानुको निकै फाइदा हरु छन् । यो मानव स्वास्थ्यका लागि निकै उपयोगी हुन्छ ।
फर्सीको पात वा मुन्टा खानाले हामी विभिन्न रोगबाट जोगिन सक्छौँ । फर्सीको साग विभिन्न पौष्टिक तत्वले भरिएको हुन्छ । फर्सीको मुन्टा भिटामिन ई, सी, ए, बी(६, पोेटासियम, फोलिक एसिड, क्याल्सियम, कपर, प्रोटिन, म्याग्नेशियम, आइरन, फाइबर, फस्फोरस जस्ता खनिज पदार्थको स्रोत हो । मानव स्वास्थ्यलाई स्वस्थ राख्नको लागि शरीरमा यी सबै खनिज तथा पौष्टिक तत्वको आवश्यकता पर्दछ ।
फर्सीको साग खानुको फाइदाहरु यसप्रकार छन् ः
१. फर्सिको पात खानाले, कोलेस्ट्रोलको समस्याबाट राहत पाउन सकिन्छ । फर्सीको पातमा पाइने फाइबरले कोलेस्ट्रोललाई नियन्त्रण गर्नुका मुटुलाई स्वस्थ राख्नमा मद्दत गर्छ ।
२. फर्सीको पातमा पाइने पोटासियमले तपाईको पाचन प्रणालीलाई स्वस्थ राख्नमा मद्दत गर्छ । त्यस्तै फाइबर एक यस्तो तत्व हो जसको सेवनले अनेक फाइदा हुन्छ । फर्सीको पातमा पाइने फाइबरले तपाईको शरीरमा भएको क्यान्सर कोषीकाहरुलाई रोक्नमा मद्दत पु¥याउछ ।
३. फर्सीको पातको नियमित सेवनले उच्च रक्तचापलाई पनि नियन्त्रण राख्नुका साथै फर्सीको पातको सागले नष्ट भएको टेस्टीकुलर र स्पर्म बन्ने प्रक्रियालाई मद्दत पु¥याउछ । जसको मद्दतले तपाईर्को प्रजनन क्षमतामा वृद्धि हुन्छ ।
४. र्सीको पातमा भिटामिन ए प्रसस्त मात्रामा पाइन्छ । जुन हाम्रो आँखाको लागि राम्रो हो । साथै आँखा कमजोर हुँदा फर्सीको पातको साग खानाले आँखाको रोशनी बढाउनमा मद्दत गर्छ ।
५. फर्सिको पातको खानाले मधुमेह रोगबाट छुटकारा पाउन सकिन्छ । फर्सीको पातको सागमा हाइपोग्लिसिएमिक नामक तत्व हुन्छ जसले तपाईको ग्लुकोजको मात्रालाई कम गर्नमा मद्दत गर्छ ।
६ . फर्सीको पातमा पर्याप्त मात्रामा भिटामीन सी पाइन्छ । भिटामीन सी छालाको लागि फाइदाजनक हुन्छ । भिटामीन सी ले छालामा भएको मृत तन्तुलाई निकाल्नमा मद्दत गर्नुका साथै छालालाई स्वस्थ बनाइ राख्छ ।